Costa Rica na-ekwuwapụta imeghe ókèala na ntinye ndị njem nleta
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ gbasara Costa Rica » Costa Rica na-ekwuwapụta imeghe ókèala na ntinye ndị njem nleta
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ gbasara Costa Rica • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Tourism • Mmelite nke Njem njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Na Nọvemba 1, Costa Rica ga-emepe ụgbọ elu ikuku ya na mba mba niile, ọ bụrụhaala na ha ezute ihe visa chọrọ na ihe achọrọ e guzobere n’ime usoro ọrịa a.
A na -arịọ ka ndị njem mba na mba niile gbasoo usoro iwu niile nke Onye guzobere Costa Rica ndị ọchịchị mgbe ha na -agbada na ala Costa Rican. Onye ọ bụla ga -eyi nkpuchi ma rube isi n'iwu siri ike nke ọdụ ụgbọ elu, gụnyere ịdọpụ uche anụ ahụ, ịsa ahụ kapeeti, iwere okpomọkụ na ịgbaso ntuziaka ahụike ọ bụla.
N’ịgbalị ịmaliteghachi ọrụ ọrụ njem, ọkachasị n’ime ime obodo nke
Costa Rica n'ime Guanacaste, Mpaghara North, Central Pacific, South Pacific na mpaghara Caribbean, Gọọmentị kpebiri ịkwado ihe ndị chọrọ ịbanye na mba ahụ.
Site na Mọnde, Ọktọba 26, ndị njem mba na mba ofesi na-abanye Costa Rica site na ikuku agaghị achọ iwepụta nsonaazụ RT-PCR na-adịghị mma (ule nke na-ekpebi ọnụnọ SARS CoV-2 nke na-emepụta COVID-19), Minista njem nleta Gustavo J. Segura kwupụtara ụbọchị Tọsde a.
Ma ndị Costa Ricans ma ndị ala ọzọ agaghị enweta usoro nhicha nke mkpo mgbe ha ji ụgbọelu na-abanye mba ahụ. Measurezọ a dabere na mgbanwe nke ọrịa na-efe efe na mpaghara mba yana ụwa.
“E mere mkpebi a maka oghere ikuku n’agwa niile mba na Nọvemba 1 na-eburu n’uche na Americantù Ahụ Ike Pan American, na akwụkwọ edere ụbọchị nke Ọktọba 9, na-ahụta na ọ dịghị mkpa ịrịọ nyocha ma ọ bụ nye iwu kwarantaini iji maliteghachi njem mba ụwa, ”ka Mịnịsta nke njem na-ekwu.
Na mgbakwunye na chọrọ mpụga mpụga maka mba ọ bụla, ihe ndị achọrọ n'ime usoro ọrịa na-adịgide n'ike bụ iji mezue ụdị dijitalụ epidemiological akpọ Health Pass na nnweta nke mkpuchi ahụike na-ezute ọnụọgụ nke iwu ndị isi guzobere.
Nkwado nke usoro ọhụrụ a ga-adabere na mmalite nke ọrịa na-efe efe na mpaghara mba.
“A na m ekwughachi oku m na-akpọ ndị ụlọ ọrụ na mpaghara ndị njem ka ha gaa n'ihu na ntinye nke itinye usoro iwu mgbochi n'ụzọ zuru oke yana ndị njem mba na mba ofesi na-eme njem nleta n'ụzọ kwesịrị ekwesị, na-agbaso usoro ịkpa oke ọ bụla nke dị
na-atụ aro iji zere nje. Omume a na nnabata nke usoro iwu ndị a dị oke mkpa iji nye oge na-aga n'ihu na usoro ndị a nke mmeghe nke akụ na ụba, nke doro anya na-enyere aka ichebe ọtụtụ puku ọrụ na mpaghara ndị njem na mba ahụ dum, "ka Minista ahụ gbakwunyere.
N'ime ọnwa abụọ gara aga, ICT enyochaala ụlọ ọrụ 150 iji hụ na agbaso usoro iwu ahụike yana 133 rịọrọ ICT maka akara njem njem nchekwa nke World Travel and Tourism Council (WTTC) nyere mba ahụ, n'ihi mmejuputa iwu ahụ Usoro ogbugba ndu 16 emere maka mmemme ndi njem. Ka ọ dị ugbu a, ụlọ ọrụ 73 nwere akara Njem Nchekwa.
A na-agwa ndị njem nwere ihe mgbaàmà dịka ahụ ọkụ, ụkwara akọrọ, akpịrị akpịrị, ike ọgwụgwụ, flu ma ọ bụ ndị yiri ha ka ha yigharịa njem ha na Costa Rica ruo mgbe ha nwere ezigbo ahụ ike.
Oghere nke oke ikuku dị ezigbo mkpa maka ịmaliteghachi ọrụ site na ụlọ ọrụ ndị njem, nke bụ otu n'ime isi injin nke akụ na ụba mba, na-ahụ maka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 10 isi nke Gross Domestic Product na karịa 600,000 kpọmkwem na ọrụ anọ.
Ntugharị nke ụlọ ọrụ ndị njem na-agụnyekwa ọgbọ nke ego mba ọzọ nke dị oke mkpa maka nkwụsi ike nke ọnụego mgbanwe dollar na colon.